बा बिनाको दशैँ खल्लो छ !! - नेपालबहस
गृहपृष्ठ विचार / बहस ब्लग/सामाजिक संजाल बा बिनाको दशैँ खल्लो छ !!
बा बिनाको दशैँ खल्लो छ !!
१९ असोज काठमाडौं । बा यतिबेला गाउँघर देखि शहर जताततै दशैको रमझम छ । मेरो मन भने शान्त छैन । गाउँका घर रातो र सेतो कमेरोले पोतेर चिटिक्क छन् । तर तिमी बिना दशैँ अनि मेरों मन फिक्का छ बा ।।
बा आजसम्म कमाउन बाहिर गएका पनि सबै फर्किसके तर तिमी फर्किनौ अनि त दशैँको माहोलले जताततै रमाइलो हुँदा पनि मलाई खल्लो लागेको छ बा ।। बाले बुझिहाल्ने गर्थे । छोरी कति व्यस्त छे । आजकाल अनि भन्ने गर्थे, ‘दशैँमा त आउने होला क्यारे ! कति दिन बिदा हुन्छ ?’ ‘दशैँमा त आउनै पर्यो नि,’ म भन्थे । यो संवाद मात्र दुई बर्ष अघिको हो ।।
दशैँ आउदै गर्दा बिरामी बाले यसरी प्रश्न गरेका थिए । आज त्यहि दिनको याद आइरहेको छ ।
दशैँलाई सबैले छोएको छ । तर मेरो मन भन्ने फिक्का फिक्का भएको छ । तिमी बिना दशैँ खल्लो छ बा ।।
बा तिमी संगको संगत खासै लामो समय भएन। एसएलसि पास भएपछि म अध्ययनको शिलशिलासंगै रेडियो प्रस्तोता र पत्रकारिता सम्बन्धी तालिम सिकेर काम गर्न थाले ।
ल ल गर काम, राम्रो संग काम सिक । बोल्न जान्नु पनि मान्छेको ठूलो सम्पत्ति हो । बा सधै यहि भन्ने गर्थे । आज याद आइरहेको छ, बा तिमी बिनाको दशैँ खल्लो छ ।
मेरो शिक्षाको पहिलो पाठशाला आमा अनि पत्रकारिताको बा ।। बाले भन्ने गर्थे, मान्छेले बोली खेर फाल्नु हुन्न । बोलिमा बहुत ठूलो शक्ति हुन्छ । तौलेर बोल्न जान्नु पर्छ । आफ्नो बोलिको जिम्मेवारी आफुले लिन सक्नु पर्छ ।
रेडियो तालिमले मेरो आत्मबिस्वास बढायो । बोल्ने र सोच्ने तरिकामा फरकपन आयो । बाले पटक पटक मलाइ यस्ता तालिम र सिकाइ सिक्न उत्प्रेरित गरिरहने गर्थे ।
उनीमा न कुनै राजनितिक शास्त्रको ज्ञान तन वैज्ञानिक नत आर्थीक मात्र थियो त सामाजिक ज्ञान ।। मेरा हरेक इच्छामा बा क्याटलिस्ट बनिदिने गर्थे ।।
बाको मुहारमा मुस्कान छचल्किने भनेकै सन्तानको सफलतामा त रैछ । आज त्यो भन्दा पनि धेरै सफलता पाएकी छु तर तिमी छैनौ बा । त्यहि भएर तिमी बिनाको दशैँ खल्लो छ बा ।।
समय चलिरह्यो। मेरो पढाइ पनि सकियो। सानोतिनो जागिर खान थालेँ मिडियामा । कैले काहीँ दुई चार पैसा बाको हातमा राख्दिन्थें। बाको हातमा पैसा पर्नासाथ ऋर्ण तिर्न गैहाल्ने बानी थियो बा को ।।
त्यो बेला बाको आँखामा टिलपिल टिलपिल आँसु देखिएको थियो । कहिले आँसु नदेखाउने मेरा ‘बा’ आफ्नो छोरीको प्रगतिमा यति सम्म भावुक हुन सक्दा रैछन आज सोच्न पनि सक्दिन म ।।
शास्त्रको ज्ञाता र धार्मिक प्रवृत्तिको व्यक्ती भएर पनि उनी मुर्ती पुजामा त्यति विश्वास नगर्ने, मठ मन्दिर त्यति नधाउने तर कला, सस्कृती र सिर्जनाको अत्यन्तै सम्मान गर्ने मान्छे! कैले काहीँ त लाग्थ्यो हाम्रा बालाइ थाहा नभएको कुरो के होला संसारमा ?
बा तिमीले जीवन भर दुख गरेउ, कमाएर छोराछोरी पालेउ सबै छोराछोरीलाई सक्षम बनाएउ । जब ढुक्कले सास फेर्ने समय आएको थियो। तर कठोर नियतिले सास नै बन्द गरिदियो ।
कहिले छोराछोरी सामु दुख पोखेनौं बरु आफै झेलेउ दुख । मलाइ कहिलै पैसाको अभाव देखानौ, बरु आफै ऋर्णमा डुबेउ ।। कहिलै आफुलाइ हेरेनौ, राम्रो खाने लाउनेमा , हामिलाइ हेरेउ बा । जब हामिले हेर्ने समय आयो अनि तिमीले आँखा चिम्लिीयौ । तिमी बिनाको दशैँ खल्लो छ बा ।।
हेर्दाहेर्दै एउटा ईतिहास, ज्ञाता, इमान्दार, कर्तब्य र जिम्मेवारिको अर्को नाम अर्थात मेरा बा धुवाँ संगै विलिन भएको आज करिव दुई बर्ष पुग्नै लाग्यो । आज पनि याद ताजै छ बा ।। बर्दियाको त्यो ओरइ नदीको तटमा तिमी जलिरयौ ।
म निरीह तातो बालुवा माथि उभिएर तिमीलाई हेरिरहेको थिए । आखिर तिमीले देखेनौ । हो आज त्यहि भएर दशैं तिमी बिना खल्लो भा छ बा ?
बुद्दले भनेका थिए । संसारमा दुख छ । दुखको कारण छ । दुख अन्त्य गर्ने बाटाहरु छन र दुखको अन्त्य गर्न सकिन्छ । जन्मनु पनि दुख हो । मर्नु पनि दुख हो । बिरामी हुनु पनि दुख हो । बुड्यौली पनि दुख हो । यी यावत दुखहरु भोगेर बाले निर्वाणको बाटो लिए ।
म तिमी जलिसके पछि मलामी गएका सबै आफन्तहरुको साथमा दुखि मन लिएर घर फर्किए ।। त्यहि दिन देखि आमाको अनुहारमा कत्तिपनि खुशि छैन यस कारण दशैँ खल्लो छ बा ।।
आज चारैतिर दशैँको माहोलले रमाइलो भैइरहेको बेला पनि मलाई तिम्रै याद ताजा बनेर आइरहेको छ बा । लाग्छ आज मेरो जिन्दगिको घाम अस्तायो ।
घाम बिनाको जिवन पनि के जिवन ।। अब ठुला ठुला दुखका भारि कहाँ बिसाउने ? साना साना सफलताका कथा कसलाइ सुनाउने बा ?
बाको दुरदर्शिता देखेर अचम्मित हुने म छेउमा टुक्रुक्क बसेर हेरिरहेको छु । उनको जीवन आदर्श र ज्ञानको भन्डारको म फ्यान थिए । कर्म गर, फलको आश नगर भन्ने गिता सारको ब्याबहारमा लागू गर्ने एक आदर्श पुरुषको अन्त्य भयो। बाका बारेमा व्याख्या गर्ने शब्द शब्दकोषमा कहाँ अटाउछन् र ? बा त आकाश भन्दा ठुला हुन् र सागर भन्दा गहिरा हुन् ।
बा तिमीले मोक्ष प्राप्त गरेउ भने यो संसारमा पुनः जन्म लिन पर्ने छैन । मोक्ष प्राप्त भएन भने फेरि पनि तिमी हाम्रै बा भएर जन्मिनु है । हर जन्म पितीलाई बा भन्न पाइयोस्। ह्यापी दशैं बा । तर तिमी बिनाको दशैं खल्लो छ बा ।।
अघिल्लो लेखटी–ट्वान्टी क्रिकेट सिरिज : नेपालद्धारा हङकङ पराजित
अर्को लेखदुई किलो ७०० ग्राम चरेशसहित दुई पक्राउ
च्याङ्ग्राको मूल्य घट्यो
चाैबिस घण्टामा उपत्यकाबाट सतचालिस हजार यात्रु बाहिरिए !
चण्डेश्वरी मन्दिर परिसरमा पिङ खेल्दै